Elilawulayo imilo sokubala
Elilawulayo ipesenti otyebileyo sokubala
Elilawulayo imilo sokubala ikuvumela ukubala parameters ahluka-hlukileyo omzimba wakho, ezifana ubunzima bakho ofanelekileyo, kwamafutha omzimba kunye nomzimba ipesenti nenqatha, ubunzima ngaphandle amanqatha, uhlobo imilo umzimba, ukutya carcinomas, ukulahlekelwa ubunzima ukutya kunye nezinye. Ibala esekelwe isini, ubudala, ubunzima, ubungakanani akho omzimba kunye nenqanaba lomsebenzi.
Isini: Imazi Indoda
4 ft 0 e 4 ft 1 e 4 ft 2 e 4 ft 3 e 4 ft 4 e 4 ft 5 e 4 ft 6 e 4 ft 7 e 4 ft 8 e 4 ft 9 e 4 ft 10 e 5 ft 0 e 5 ft 1 e 5 ft 2 e 5 ft 3 e 5 ft 4 e 5 ft 5 e 5 ft 6 e 5 ft 7 e 5 ft 8 e 5 ft 9 e 5 ft 10 e 6 ft 0 e 6 ft 1 e 6 ft 2 e 6 ft 3 e 6 ft 4 e 6 ft 5 e 6 ft 6 e 6 ft 7 e 6 ft 8 e 6 ft 9 e 6 ft 10 e
i-cm iinyawo / intshi
Uphumle izinga intliziyo:
Ukubala njengoko umlinganiselo 3-5 imilinganiselo inani ibetha intliziyo ngomzuzu kusasa emva elele ebhedini.
Esinqeni (kwingongoma thinnest):
Ngokuqhelekileyo, le ndawo ngaphezu inkaba.
Isinqe (inxalenye ulwimi):
Yolula ngaxeshanye isandla sakho phantsi. Goba ingalo yenu ebiselixeliwe ukuya kwiqondo 90 ukuze kumacala yakho aa emhlabeni. Sebenzisa nasesithupheni ngomnwe kunye istrip ezinye ngesandla ulinganise umgama phakathi amathambo. Umlinganiselo umgama ngesandla (phakathi kweminwe yakho ngomnwe nobhinqisikhaka) kunye isikali leyo ububanzi yakho ingqiniba.
Khankanya inqanaba yakho umsebenzi yokuphila.
umsebenzi ungenzi umsebenzi ukukhanya avareji umsebenzi umsebenzi olungileyo umsebenzi ubuninzi
Khankanya Injongo imisebenzi kwezemidlalo.
ufumane ukumila kakuhle Ukuhla ukusinda ukwandisa kukudima- umzimba lweembaleki ezemidlalo ephikisayo
Bala ubunzima bakho ofanelekileyo, kwamafutha omzimba kunye nomzimba ipesenti nenqatha, ubunzima ngaphandle amanqatha, uhlobo imilo umzimba, ukutya carcinomas, ukulahlekelwa ubunzima ukutya kunye nezinye.
Counter ikhalori online
Zingaphi kilojoules wena kuwutshisa (iindleko lweekhalori) ngelixa ukubaleka, ukuhamba, ukudada, njalo-njalo.
Efanelekileyo calculator ubunzima
Bala ubunzima onguwo womzimba abasetyhini kunye namadoda ukuxhomekeka yobudala bakho, ukuphakama nohlobo umzimba.
Kwezihlunu inzuzo sokubala
Bala isixa lweekhalori ngosuku ukuba ziyafuneka ukuba ufuna ukwakha izihlunu.
Ubunzima inzuzo sokubala
Bala isixa lweekhalori ngosuku ukuba ziyafuneka ukuba ufuna bafumane ubunzima bakho kunye nezihlunu, okanye ukuncipha.